Wiil dhallinyaro ah oo si arxan darro ah xalay aabihiis ugu dilay magaalada Muqdisho | Dalkaan.com
Home Warkii Wiil dhallinyaro ah oo si arxan darro ah xalay aabihiis ugu dilay...
Wiil dhallinyaro ah oo si arxan darro ah xalay aabihiis ugu dilay magaalada Muqdisho
Muqdisho (dalkaan) – Dhacdo murugo leh ayaa xalay fiidkii hore ka dhacday gudaha magaalada Muqdisho, gaar ahaan xafadda Obasiibka ee degmada Wadajir, kadib markii wiil dhalinyaro ah uu Aabihiis ku dilay Mindi ama Toorey uu kaga dhuftay dhanka wadnaha.
Marxuumka oo qiyaastii 60 jir ahaa ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Cismaan Garboojo, wuxuuna caan ka ahaa suuqa weyn ee degmada Wadajir oo uu ka shaqeysan jiray.
Wararka ayaa sheegaya in wiilka dilka geystay oo isna 20 jir ah uu goobta isaga baxsaday, kadib falkaasi, waxaana magaciisa lagu sheegay Cabduqaadir Cismaan Garboojo.
Mid ka mid ah raggii ay isla shaqeyn jiray Aabaha la dilay ayaa ka warbixiyey, sida ay wax u dhaceen, wuxuuna sheegay in isbitaalka loo qaaday, kadibna uu geeriyooday Aabaha.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu baxsaday wiilka dilka geystay, isaga oo ugu baaqay saraakiisha laamaha ammaanka in gacanta lagu soo dhigo eedeysanaha baxsadka ah.
“Innaa lilaahi waa innaa ileyhi raajicuun mid aan suuqley isla nahay oo Garboojo la dhahaayo oo suuqaas weyn aan wax iskala dhacsaneynay aa wiilkiisa mindi ku dhuftay wiilkiisana waayey,” ayuu yiri mid ka mid ah ragga ay isla shaqeynayeen marxuumka.
Waxa kale oo uu intaasi kusii daray “Annaga suuqa ayaan joognay taleefoon ayaa naloo soo diray isaga oo isbitaalka loo qaaday marka laga soo celiyeyna meyd ayuu ahaa wiilkiina waa baxsaday,”.
Dhinaca kale wararka ayaa sheegaya in muddooyinkii lasoo dhaafay uu miran ka dhex jiray qoyska iyo wiilka dilka geystay oo la sheegay inuu lahaa balwad, isla-markaana uu isticmaalayey daraagis, sida ay innoo sheegeen qaar ka mid ah ehellada marxuumka.
Dhacdadan ayaa si weyn la yaab ugu noqotay dadka deegaanka, waxaana guriga marxuumka buux dhaafiyey dadweyne isaga kala yimid xaafadaha Muqdisho.
Previous articleCristiano Ronaldo oo kamid ah Xidigaha kasoo Horjeeda Magacaabista Antonio Conte
Next articleWeerar sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay Afgooye
Manchester United oo xaqiijisay magacaabista Ralf Rangnick
dalkaan_2ujpzr - November 29, 2021 0
Manchester United ayaa xaqiijisay in Ralf Rangnick loo magacaabay macalin ku meel gaar ah. Tababarihii hore ee RB Leipzig ayaa bedeli doona Ole Gunnar...
Natiijo: Chelsea 3-1 Southampton, Blues oo la wareegtay Hogaanka Horyaalka Premier...
Midowga Musharaxiinta oo shaaciyey qorshe ay wadaan si looga hor-tago…
Xog: DF oo CIIDAMO horleh ka dajisay Dhuusamareeb iyo wararkii ugu...